I-Il Cortile Fiorito - Igumbi elinombono echibini - I-Airbnb
I-Il Cortile Fiorito - Igumbi elinombono echibini
Ikamelo e-ikhaya ibungazwe ngu-Massimo
Igumbi lokulala eliphindwe kabili endlini yasendulo egqumeni lokuqala ngenhla kweStresa. Igumbi lokugezela le-Ensuite ne-lakeview balcony, ukufinyelela kwangasese esitezi sokuqala.Igumbi lezivakashi linesitayela sothando nesimo sezulu sendlu endala yomlando, umbhede ophindwe kabili ongu-160x200, amatafula aseceleni kombhede anamalambu, izihlalo zengalo, i-pouf, nekhabethe elibanzi.Ukufinyelela kungegcekeni elingaphakathi elinompheme. Igumbi lokugezela le-ensuite elineshawa, indishi, i-bidet kanye ne-w.c. I-Lakeview balcony enetafula nezihlalo. Intela yedolobha ifakiwe enanini legumbi.
Indlu endala enenkantolo encane enhle. I-Cortile Fiorito iyindawo ekahle yokuphumula kwezothando noma iholide eliphumulele.
Umpheme, ofakwe itafula nezihlalo, uyindawo egcwele futhi ekhethekile yezivakashi, futhi ilungele ukudla kwasekuseni, kwasemini / kwakusihlwa.Akwenzeki ukupheka, kodwa izihambeli zingaphinde zizihlele ngesevisi yasekhaya ehlinzekwa izindawo zokudlela ezisendaweni eseduze.
4.99 · 140 okushiwo abanye
Indlu itholakala e-Binda, indawo enhle yokuhlala emagqumeni, ukuhamba ngemoto eyimizuzu emi-5 ukusuka enkabeni yedolobha iStresa noma uhambo lwemizuzu engama-20, enombono omangalisayo eLago Maggiore nase-Alps.Kukhona indlela yokuhamba engokomlando esuka endlini iye enkabeni yedolobha iStresa edlula eChapel yasendulo yasePassera.
Uma kwenzeka udinga ulwazi olwengeziwe, uMassimo umphathi wakho uyatholakala kuwe.
Hlola ezinye izinketho ezise- Stresa namaphethelo